Kanjani ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina ndawonye? Kanjani ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina kanye nabathandekayo bakho?
Sasebenzisa ukugubha uNcibijane esinomsindo ukuzijabulisa nabangane noma izihlobo. Kodwa ngezinye izikhathi ufuna ukuchitha leli holide ezimangalisayo kanye obathandayo. Ukuze akwenze kube ukhumbuleka ngempela, kudingeka nokukulungiselela. Indlela ukuhlangabezana uNcibijane ndawonye, ukwenza iholide ongasoze isikhathi eside? Ziningi imibono original salokhu.
A izizathu ezimbalwa ukugubha uNcibijane ndawonye
Ukushesha yesimanje yokuphila akasivumeli ukuba uchithe isikhathi esiningi kwamanye nengxenye yakhe, ngakho ukuchitha isikhathi kufike uNyaka Omusha ndawonye ekhaya - ikhambi ephelele. Umkhankaso ngokuhlanganyela izipho, isihlahla sikaKhisimusi umhlobiso, ukupheka iholide ukudla basondele kakhulu.
Ukugubha kuphela nomlingani wakho, awukwazi ukhathazeke yokugqoka. Alone nomlingani wakho, ungakwazi kalula bagqoke up ekwembuleni izingubo nge amasokisi amade futhi cleavage ezijulile. Into esemqoka ukuthi ukuhlomisa ethanda.
Umhlangano uNcibijane kanye obathandayo, ungahambisa kude eyeqisayo evamile. Gala idina zingasuswa embhedeni, phansi noma egumbini lokugezela. Njengoba isipho ongasipha othandekayo kungaba ukudansa umdanso somlilo noma ahlele striptease.
Uma unqume ukugubha uNcibijane nomyeni wakhe, kubalulekile ukuba sihlole amaphuzu athile kuzosiza ukuhlela a celebration ngempela uthando.
Lona umthetho sokuqala nesibaluleke kakhulu. Uma omunye umlingani akulona New Year ngaphandle inkampani ezinomsindo, kungcono ukuze bazame ukuphula intando yakhe. Kungenjalo ebusuku samaholide kungenzeka ngobusuku bokugcina wachitha ndawonye. Ngakho uma umngane womshado ehluleka ukukholisa, kungcono ukuya bezohlangana naye.
Ngamunye wethu uyaqonda ukuthi iholide ngokwayo ngeke zisebenze. Uma unqume ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina nomyeni wakhe, cabanga lwesigameko kusengaphambili ngamalanga wakho wamaholideyi. Kwesiko kanye win-win isimo uhlale samaholide amakhandlela isidlo santambama. Kungcono uma ulungiselela ukugujwa kuyoba ndawonye: ukuhlanza indlu, ukuhlobisa isihlahla sikaKhisimusi, ukulungiselela iholide izitsha, ubeke itafula. Uyacelwa ukuba beveza imenyu yokuqala, kanye banakekele izingubo zemikhosi. Uma wayefisa, ungakwazi ukuthenga ngisho zokubhukuda ukuthi ukudala isimo imfihlakalo futhi usongo.
Okufanele ukwenze emva kwamabili?
Ukunquma ukuthi ukugubha uNcibijane ndawonye, cabanga kusengaphambili uzokwenzani ngemva uphuza ingilazi champagne ngaphansi iwashi chiming. Ungakwazi nje udle uhambe ukuvakashela abangane ukugubha uNyaka Omusha inkampani. Ungakhohlwa uxwayise mayelana nokuhambela kwakhe, noma angase abe isimanga edabukisayo.
Enye - uhamba ibanga romantic izungeze lo muzi. Vakashela izindawo nezinsuku zakho zokuqala. Lena isikhathi kuhle ukukhumbula ngemizwa yabo. izinkumbulo ezinhle Common kuzokwenza uzizwe sengathi bayakwazisa nomunye. Zizwe emkhathini iholide, ukujabulela ukukhanya, isihlahla sikaKhisimusi.
Izipho kufanele kube njengoba ngezifiso. Kungaba yini imihlobiso ngomusa, i-CD ne umculo owuthandayo ezihambisana ngezandla isikhafu. Lesi sipho kufanele kube omunye ukumenyezelwa uthando.
Bayakhohlwa ekuphileni kwansuku zonke
Zama singabuchithi ekuseni imisebenzi yasekhaya kaNcibijane. Post-iholide yokuhlanza ungalungisa indoda hhayi isimo romantic kakhulu. Ayikho into embi eyokwehlela uma izitsha kuzokwenziwa ngosuku olulandelayo. Indlela ukuhlangabezana uNcibijane ndawonye, ngaphandle kokuphazamiseka ngo kwezinkinga zasekhaya? Izinketho leli holide setha.
Uma uya ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina ngakho ukwenza ubhuka kusengaphambili. Esikhathini uNcibijane , ungakwazi pamper ngokwakho nge ezibizayo futhi izitsha engavamile, wayala Igumbi inkonzo. Ngaphambi iwashi eshaya 12, ungaya ngqo ngaphakathi ehholo lapho sebegqoke izingubo zemikhosi, dancing ku ibhola KaNcibijane, avame ukuhlela izivakashi, bese ubuyela Igumbi ubone uNcibijane yedwa nomunye esimweni romantic.
Abantu abahlala enkangala, ungakwazi ukuqasha indlu ezimbili. umhlangano Lokhu kaNcibijane okuzoba romantic esimnandi. Lapho ehlangana nomuntu iholide ezintabeni, uyojabulela umoya ohlanzekile, nezindawo ezinhle futhi ethokomele uphumule by eziko. Engeza romance isikhumba esingokwemvelo bear yembethe iziko, lapho ungakwazi ukufika uNyaka Omusha izingalo kothandekayo. Ungakhohlwa pre-ubhukhe igumbi.
Futhi ungakwazi nje ukuqasha indlu emzaneni, kude impucuko. Holiday aba mnandi ikakhulukazi uma emzaneni kukhona isiko ukuhlela imikhosi kaKhisimusi isidlo yendabuko. Futhi ekuseni bayokujabulela ugeza umusi kanye eziphonsa emgodini.
Unyaka omusha Kwamanye Amazwe
Kanjani ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina ndawonye bese uthole okuningi imizwelo eyakhayo? Ngenxa yalesi izinkambo omkhulu phesheya kwezilwandle. Ngaphezu kwalokho, kungcono yithuba elihle ukubona eziningi ezithakazelisayo futhi ezintsha. Ububi leli holide kuyinto endleleni okungaba eyisicefe. Yiqiniso, leli holide izobiza kancane eqolo ngaphezu kwanoma uNcibijane ekhaya, kodwa kulabo abasebenza ukuhamba lokhu kuyithuba elihle ukuqaphela izifiso zabo. Izinketho eziningi ahlinzekwa izinkomba wonke umuntu angakhetha yini ayithandayo. Kubalandeli of yokwenziwa ukuzilibazisa suit ngasolwandle baphendukela nge Ilanga elihlale libalele esimweni zemikhosi. Abathandi izindawo amahle ocebile emlandweni ngeke asondele uhambo Austria, eFrance nase-Italy.
Kanjani ukugubha uNyaka Omusha WamaShayina ndawonye pair, okuyinto efana anomsindo, ukuhlangana nabantu abasha futhi banokuhlangenwe nakho? Iya yokudlela noma kwe-nightclub. A isici esihle iholidi ukuthi akanayo ukuma isitofu. Lokhu kukhetha efanelekayo, futhi nalabo abasebenza Eva kaNcibijane.
Le ndlela kuyobenza babe abalandeli ukuphumula kakhulu. Uma ecabanga ukuthi ukugubha uNcibijane ndawonye ezithakazelisayo futhi engavamile, khetha amanye ekhoneni romantic komuzi sokulungiselela sesiphila ezinjalo. Ukuze kube lula, ungathatha izihlalo ukusonga, ukulungiselela izitsha, izibani, BBQ, itiye hot in a thermos. Ungakhohlwa mayelana ezishisayo zangaphansi futhi ebusika izicathulo ezinhle. Kebabs emoyeni nesithwathwa fresh - yini romantic more!
Aint it romantic ukugubha uNyaka Omusha emahlombe womunye nomunye, ejabulela ukubukwa kumnandi of izibani edolobheni kusukela ophahleni lwesakhiwo ubude? Ukuze wenze iholide yimpumelelo, ungakhohlwa ukuba sigqoke ngokufudumele, ubambe champagne kanye ukudla okulula, kanye thermos itiye hot.
esikhungweni salo mdlalo
Ungathanda kaNcibijane inganekwane? Iya rink. Letha champagne kanye izibuko. Gliding yonkana ice ndawonye, ngeke ubone ukuthi isikhathi siyandiza. Futhi lapho iwashi ushaya nambili, sekuyisikhathi ukuvula champagne kanye izibuko ezandleni zabo ukwenza isifiso.
Indlela ukuchitha New Year ndawonye engavamile? Nanti elinye icebiso yasekuqaleni - ukuhlela iholide egumbini isitimela. Ngu yokulinganisa umsindo amasondo, ungakwazi ukubuka enhle ebusika landscape ngaphandle kwefasitela, futhi-ke, ujabulela inkampani nomunye.
Ngisho kulula ukugibela imoto emzini ebusuku futhi elinde phakathi kwamabili ukugubha uNcibijane, lapho ethola khona. Udinga ukuthatha nge izithelo noma amaswidi kanye champagne. Ububi ukuthi umshayeli kuyodingeka ukuhlangabezana iholide emuva ekhaya.
Eqinisweni, abantu abathanda akunandaba ukuchitha isikhathi kufike uNyaka Omusha ndawonye lapho futhi kanjani, okubaluleke kakhulu, ukuvala ayengumuntu abaseduze futhi abathandekayo.
Yini iholidi System Administrator Day?
Khetha isixha ngoba amadoda: ongakhetha design
Indlela yokwenza emlilweni ophakade ngezandla zabo - yezigaba master ekilasini
Imisipha ikhula kanjani kubantu abaqeqeshwe?